मनोरञ्जन के हो थाहा छैन – Chitwan Post
मनोरञ्जन के हो थाहा छैन
संसारका सबै मान्छेहरुलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ, मनोरञ्जनबिना जीवन औधी खल्लो हुन्छ भनिन्छ । उसो त, मनोरञ्जन मान्छेलाई मात्र होइन अरु प्राणीहरुलाई पनि चाहिन्छ भन्ने भनाइ छ । अरु प्राणीहरुले मनोरञ्जन के तरिकाले प्राप्त गर्छन् धेरैलाई यो अनुसन्धान गर्ने वा सोच्ने फुर्सद छैन, किनकि मनोरञ्जन चाहिए पनि कस्तो खालको चीज वा खाना वा खेल वा दृश्य वा चालामालालाई मनोरञ्जन भनिन्छ, यो आजसम्म कसैले निर्णय गरेको छैन । जसले जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु मनोरञ्जन हो भनियो भने गलत हुन्छ, किनकि त्यसो गर्न सामाजिक र राज्यको कानुनले छेक्छ । अब घुमाएर सोध्न जरूरी छैन, सीधा सोध्नुपर्छ मान्छेका लागि खास मनोरञ्जनको साधन के हो ?
संसारमा मनोरञ्जन महसुसचाहिँ गरिने तर कुनै खास विशेष चीजलाई मनोरञ्जन भन्न नसकिएको अवस्थामा सयौँ वर्ष पहिले महिलाका लागि मनोरञ्जनको साधन पुरूष थिए भने पुरूषका लागि मनोरञ्जनका साधन महिला थिए । त्यतिबेलाका मानिसका अगाडि जंगली जीवजन्तु, रुखबिरूवा, डाँडापाखा, पानी, अन्य जनावरहरु, पानीमा माछा र मान्छेको हकमा महिला र पुरूष थिए । मान्छेलाई बिहान र बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल थियो । खानाको खोजीमा दिनभर भौँतारिन्थे । जसोतसो खानाको बन्दोबस्तपछि तिनलाई बासको समस्या थियो । सधैँभरि एकनासले एकै ठाउँमा बस्दा खाना सकिने हुँदा खानाको खोजीका लागि चहार्दा बास पनि बदल्न पथ्र्यो । यस्तो अवस्थामा अरु कुरा सोच्ने फुर्सद हुने कुरा भएन । जतिबेला फुर्सद हुन्थ्यो त्यतिबेला पुरूषले महिलालाई र महिलाले पुरूषलाई हेरेर वा अन्य तरिकाले मनोरञ्जन प्राप्त गर्थे । यसबाहेक मनोरञ्जनको कुनै विकल्प थिएन । औधी भोक लागेको बेला कुनै सिकार पाउनु र खुसी हुनुलाई मनोरञ्जन भन्न मिल्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर यदि यसलाई मनोरञ्जनको कोटीमा राख्न नमिल्ने हो भने त्यही एउटाभन्दा अर्को विकल्प थिएन ।
अब जमाना बदलिँदै गयो । मानव सभ्य हुँदै गए । मान्छे पूरा नांगोबाट आधा नांगोमा आइपुग्दा निकै प्रगति भएको मानियो । बिस्तारै बिस्तारै संसारमा पूरा नांगो शरीरवाला मान्छे अपवादलाई छाडेर देखिनै छाडे । मानव सभ्यता फराकिलो हुँदै जाने क्रममा अरु आवश्यकताका वस्तुसँगै मनोरञ्जनको सम्बन्धमा पनि चर्चा हुँदै गयो र एउटा निष्कर्ष निकालियो अनि भनियो– “मनोरञ्जन मान्छेको जीवनका लागि अनिवार्य” छ । यही निष्कर्षका आधारमा संसारका धेरै देशहरुले २४ घन्टाको समयलाई विभाजन गरे र ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनका लागि छुट्याए । यसरी २४ घन्टालाई विभाजन गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संरक्षण र मानसिक अवस्था सन्तुलनमा रहने विश्वास गरियो र गरिएको विश्वासअनुरुप नै मानिसहरु केही हदसम्म सन्तुष्ट हुन सकेको महसुस गरियो । अब नेपालको हकमा चर्चा गर्दा नेपाल सरकारले २४ घन्टालाई यसो गर्ने वा उसो गर्ने व्याख्या, विश्लेषण वा कुनै खालको नियम बनाउन र लागू गर्न सकेन वा त्यसतर्फ ध्यानै पुगेन । सरकारी जागिरको हकमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म शनिबार र शुक्रबारलाई छाडेर ७ घन्टाको ड्युटी तोक्यो, तर बाँकी समयबारे केही बोलेन । पहिलेका सरकारहरु बोलेनन्, अहिलेको सरकारले पनि यसबारे केही बोलेको छैन । आरामका लागि कति घन्टा बिताउने हो वा मनोरञ्जनका लागि कति घन्टा खर्च गर्ने हो, बिलकुल शब्दविहीन रह्यो सरकार ।
अब नेपाली सबै उमेरका मानिसहरुले विभिन्न चीजलाई प्रयोगमार्फत मनोरञ्जन लिने गरेका छन्, तर सरकारले त्यस्ता चीजलाई मनोरञ्जन नमानेर कानुनको दायरामा ल्याएको छ । उदाहरणका लागि जुवा र तासलाई मान्छेहरुले मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरे । यो मनोरञ्जनले जित्नेलाई चाहिनेभन्दा ज्यादा मनोरञ्जन हुने र हार्नेलाई आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याएको देखियो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले जुवा र तासलाई कानुनीरुपमै प्रतिबन्ध लगायो र जुवातासमार्फत कसैले मनोरञ्जन लिन चाह्यो भने उसलाई जुवा ऐन लगाएर थुन्न थाल्यो । यसको अर्थ जुवाप्रेमीहरुले जुवातासलाई मनोरञ्जन माने, तर सरकारले यसलाई मनोरञ्जन मानेन र प्रतिबन्ध लगायोे ।
यही कारण भर्खरै सकिएको दसैँ र तिहारमा जुवाडेहरुलाई सरकारले पक्रेर कानुनी कारबाही अघि बढायो । पहिले पहिले शक्तिशाली र पहुँचवाला, तिनका नातापाताका मान्छेलाई बिनाकानुनी कारबाही प्रहरीले ससम्मान छाडिदिन्थ्यो, तर केपी ओली सरकारको पुलिसले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे किन नहोस् निम्ठो कानुनी कारबाही गर्ने चाँजोपाँजो मिलायो । अब गैरकानुनी स्त्रीभोगमार्फत लिइने मनोरञ्जनको अवस्थालाई पनि सरकारले भकाभक लिँड्को लाएजसरी जोसुकै त्यो खालको मनोरञ्जनप्रेमी होस् कानुनी साङ्लाले बाँध्न सुरू गरिहाल्यो । ठूलो माछाको रुपमा देखिएका नेपालका एक जना चर्चित व्यक्ति, सभामुख र मन्त्री भइसकेका कृष्णबहादुर महरालाई कानुनी साङ्लाले बाँधिहाल्यो । उनको गैरकानुनी स्त्रीभोगवाला मनोरञ्जनले महरालाई यतिबेला थुनुवा कोठामा पु¥याएको छ । महरा ठूला ओहदाका भए । साना ओहदा र ओहदाविहीनहरु जो त्यो खालको काममार्फत मनोरञ्जन प्राप्त गर्न चाहे तिनीहरु देशका विभिन्न जेलहरुमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । यसरी हेर्दा जुवातास र गैरकानुनी स्त्रीभोगलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्यायो, तर केहीले यी दुई कर्मलाई मनोरञ्जन माने ।
पटाका पट्काउने कामलाई जनताका छोराछोरीले मनोरञ्जन माने, तर सरकारले पटाका पट्काउनेहरुलाई समातेर थुन्न थाल्यो । पटाका पट्काउने कामलाई पनि सरकारले गैरकानुनी भन्यो । क्रिकेट वा फुटबलजस्ता लोकप्रिय खेलमा पक्ष÷विपक्षको टिममा करोडौँकरोडसम्मको बाजी थाप्ने र हार्ने÷जित्ने काम भएको सरकारले थाहा पायो । त्यसलाई पनि “सट्टेबाजी” गैरकानुनी भन्दै खेल्ने खेलाउनेहरुलाई पक्रेर भकाभक थुन्न थाल्यो । कसैकसैलाई गाँजा÷चरेसको धूवाँमा रमाउन मन लाग्यो । जसले त्यो खालको धूवाँलाई मनोरन्जन मान्न थाले त्यसलाई पनि सरकारले गैरकानुनी भन्यो र समातेर थुन्न थाल्यो । होली पर्वमा विशुद्ध रङ दल्न छूट दियो, तर सरकारले जबर्जस्ती रङ दल्ने र लोला हान्नेलाई समातेर थुन्न थाल्यो, जब कि मान्छेहरुले जबर्जस्ती रङ दल्न र लोला हान्नलाई चाहिँ मनोरञ्जन मान्न थाले । धनी बनेर गरिबलाई हेपेर मनोरञ्जन लिन पनि यो देशका धेरै मानिसहरु लालायित भए । यो खालको मनोरञ्जन प्राप्त गर्न गैरकानुनी बाटो रोजे । जसलाई कानुनले समात्न सक्यो ती सबै जेल परे । जो–जो कानुनी फन्दामा पर्न बाँकी छ तिनीहरु जेल जान बाँकी छन् । यहाँनेर पनि के देखियो भने गरिबलाई हेपेर मनोरञ्जन लिने कामलाई त सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर थान्को लाउन थालेकै हो, त्यो खालको गैरकानुनी धनार्जन प्रक्रियालाई मनोरञ्जन मान्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु झनै उदेक लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ । चर्को आवाजले बाजा बजाउनु, रेडियोको आवाज घन्काउनुलाई धेरै नागरिकले मनोरञ्जन माने, तर यस्ता कामलाई समेत सरकारले कानुनविपरीत भन्यो र त्यो खालको काम गर्नेलाई सजाय दिन थाल्यो । चुरोट पिउनेहरुका लागि चिया पिएपछि वा खाना खाएपछि र त्योभन्दा ज्यादा रक्सी खाएपछि सररर चुरोटको धूवाँ निल्नु बडो स्वर्गीय आनन्द र मनोरञ्जन हुनेभयो । यिनले सार्वजनिक स्थानमा जानीबुझी हेपेरै चुरोट पिए । अरुको स्वास्थ्यमा हानि पु¥याएर मनोरञ्जन लिए, हिजोआज पनि लिइरहेका छन् तर फेरि सरकारले यो खालको मनोरञ्जनलाई गैरकानुनी ठहर ग¥यो ।
हिजोआज मनोरञ्जनका रुपमा मोबाइल भित्रिएको छ । मोबाइलमा फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, युट्युव प्रयोग गरेर नेपाली महिला–पुरूषहरु लम्पट कसेर कुर्सीमा, ओछ्यानमा, गाडीको सिटमा, भट्टीमा, अफिसमा, बाटोको छेउमा, चौरमा बसेका छन् । मोबाइल चलाउँदा कतिबेला हाँस्छन्, कतिबेला रून्छन्, कतिबेला बम्किन्छन्, कतिबेला ठुस्किन्छन् । यही मोबाइलकै कारण कतिका श्रीमती घर छाडेर टाप कसेका छन् । कतिका श्रीमान्का दिमाग सड्किएका छन् । घरको काम ठीक समयमा भएको छैन, खाना ठीक समयमा पाकेको छैन । बालबालिका ठीक समयमा स्कुल जान पाएका छैनन् । मोबाइलमार्फत लिइने मनोरञ्जनबाट समाज पूरै अस्तव्यस्त हुन लागेको छ । समाज भाँडिने खतरा सरकारले महसुस गर्न लागेको छेकछन्द देखिएको छ र सम्भवतः सरकारले पूरै बन्देज नगरे पनि आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यो त आजको समस्या भयो । हिजोआजका स्कुल जाने उमेरका, नर्सरीदेखि माथिका प्रायः सबै बच्चाबच्चीले मोबाइल बोक्न थालेका छन् र पब्जीजस्तो खतरनाक खेल खेल्न थालेका छन् । विज्ञहरु भन्छन्, यो गेममा लत लागेपछि यसबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुँदैन र पढाइलगायत स्वास्थ्य अवस्था पूरै बिग्रिन्छ । यस्तो पनि बताइन्छ कि यो लत छुटेन भने केही वर्षको अन्तरालमा यो गेमका कारण मस्तिष्कले अरु कुरा सोच्न सक्दैन, केवल पब्जीमात्रै दिमागमा आउँछ । यो खतराबाट पार पाउन पनि सरकारले केही न केही तुरून्तै गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अब भनिएको छ कि मान्छेलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ । मनोरञ्जनबिना मान्छेको जीवन नीरस हुन्छ । तर, जब मान्छेहरु आफूखुसी मनोरञ्जनका साधनहरु छनोट गर्छन् तब सरकारलाई प्रतिबन्ध लाउन चटारो आइलाग्छ । एकातिर आठ घन्टा मनोरञ्जन हुनुपर्नेमा उस्तैपरे चौबिसै घन्टा मनोरञ्जन खोज्ने अवस्था, अर्कोतिर जुन जुन काम र विषयलाई मनोरञ्जन ठानिन्छ त्यही घातक सावित हुने र सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने जुन अवस्था आज नेपालका अगाडि देखिएको छ यो अवस्था अत्यन्त खतरनाक स्थिति हो । यदि अब पनि मनोरञ्जनलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थित गरिएन भने यही एउटा कमजोरीले देश खाडलमा खस्न सक्छ, अरु समस्याहरुको गन्ती गर्नै पर्दैन । सबैभन्दा उत्तम काम यही हो कि अब सरकारले के मनोरञ्जन हो के होइन घोषणा गरिदिनुपर्छ । जनताले जे कामलाई मनोरञ्जन ठान्छन् त्यसमाथि डन्डा चलाउने तर मनोरञ्जन यो हो भनी नअथ्र्याउने गर्दा देश सधैँभरि एउटै मनोरञ्जन शीर्षकमा अलमलिन्छ । सरकार ! नेपालीका लागि मनोरञ्जन के हो, आठ घन्टा मनोरञ्जन लिने कसरी, कस्तो कामलाई मनोरञ्जन भन्ने जनतालाई जानकारी होस् । आवश्यक परे मनोरञ्जन मन्त्रालय र मनोरञ्जन विभागसमेत निर्माण गरियोस् र समस्या समाधान गरियोस् ।
माछापुच्छ्रे बैंकको १०५औँ शाखा उद्घाटन